भ्रष्ट गाउँपालिका अध्यक्ष केसी ८ लाख घुससहित समातिए
२०७६ माघ ११ गते ०७:५०
सुर्खेत । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेतस्थित कार्यालयबाट खटिएको टोलीले ८ लाख घुससहित जाजरकोट जुनीचाँदे गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीलाई पक्राउ गरेको छ । उनलाई सेवाग्राहीसँग घुस लिँदै गर्दा सुर्खेतको कटकुवा हेल्थपोष्ट नजिक घण्टाघर अगाडीबाट घुसको रकमसहित रंगेहात पक्राउ गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । अध्यक्ष केसीले सेवाग्राहीलाई घुस मागेर हैरान पारेको भन्दै उजुरी परेपछि उनलाई अख्तिया ... read more...
घुससहित रंगेहात पक्राउ परे कार्यालय सहयोगी यादव
२०७६ माघ १० गते १०:१९
राजविराज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरीबाट खटिएको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीका एक कर्मचारीलाई घुससहित रंगेहात पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कार्यालय सहयोगी केशवकुमार यादव रहेका छन् । उनलाई अख्तियारबाट खटिएको टोलीले सेवाग्राहीबाट मुद्दा मिलाइदिन्छु भन्दै चार हजार रुपैयाँ घुस लिँदै गर्दा रङ्गेहात पक्राउ गरेको थियो । करारमा कार्यरत यादवलाई म ... read more...
वन उपभोक्ता समितिका भ्रष्ट अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष घुससहित समातिए
२०७६ पुस २१ गते १८:४४
कैलाली । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कञ्चनपुर कार्यालयबाट खटिएको टोलीले कैलाली सिद्धनाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र कोषाध्यक्षलाई एक लाख ६० हजार घुससहित पक्राउ गरेको छ । घुसको रकमसहित पक्राउ पर्नेमा अध्यक्ष कुवेर थापा र कोषाध्यक्ष मोहन सिंह रहेका छन् । उनीहरुलाई अख्तियारको कञ्चनपुर कार्यालयबाट खटिएको टोलीले सिद्धनाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्यालयबाट घुससहित सोमबार पक ... read more...
रोकिएन असुली, ६ महिनामा १ सय ६५ कर्मचारी समातिए
२०७६ पुस २० गते १०:१२
काठमाडौं । संघीय सरकारका विभिन्न निकायमा पनि सेवा प्रवाह गर्दा घुस असुल्ने प्रवृत्तिमा कमी आउन सकेको छैन । सेवा प्रवाहका नाममा सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले सर्वसाधारणसँग घुस असुल्ने क्रम अहिले पनि यथावत् रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । अख्तियारले गरेको अध्ययनअनुसार संघीय सरकारअन्तर्गत रहेका विभिन्न सरकारी कार्यालय भ्रष्टाचारको उच्च जोखिममा रहेका छन् । ती कार्यालयमा कर्मचारीले ख ... read more...
१५ हजार रुपैयाँमा लोभ गर्दा सईको हातमा लाग्यो हत्कडी
२०७६ पुस ६ गते ११:५४
धनुषा । पछिल्लो समय सवैभन्दा बढि घुससहित पक्राउ पर्नेमा प्रहरीको संख्या सवैभन्दा बढि देखिएको छ । धनुषा धारापानी प्रहरी चौकी यज्ञभूमिमा कार्यारत प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) मात्र १५ हजार रुपैयाँ घुससहित रंगेहात पक्राउ परेका छन् । दुर्घटना मुद्दा मिलाइदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग १५ हजार घुस लिँदै गर्दा उक्त चौकीमा कार्यरत सई कालीचरण पंजियारलाई अख्तियारले पक्राउ गरेको हो । उनलाई शुक्रबार साँझ धनुषाको मिथि ... read more...
वेतिथिको नमुना: सेनाको रासन ठेक्कामा यसरी हुन्छ घोटला
२०७६ पुस ४ गते ११:०१
काठमाडौँ । जब सेनाभित्र रासनको टेण्डर प्रक्रिया सुरु हुन्छ तब अनेकन विवाद र भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू बाहिर आउँछ । अहिले पनि त्यही प्रकरण दोहोरिएको छ । उपत्यकाभित्र नै रासन घोटाला प्रकरण बाहिर आउनुले सेनाभित्रको रासन प्रकरणमा भ्रष्टाचार गर्ने कूनियत हटेको रहेन छ भन्ने कुरा पनि उजागर भएको छ । प्रसंग–भक्तपुरस्थित वीरदल गणको हो । उक्त गणको गणपतिमा प्रमुख सेनानी शिव पौडेल रहेका छन् । आगामी एक वर्षक ... read more...
दुई लाख घुस माग्ने वडाध्यक्षको हातमा लाग्यो अख्तियारको हत्कडी
२०७६ पुस ४ गते ०९:४७
नवलपरासी । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बुटवलबाट खटिएको टोलीले बिहिबार एक वडाध्यक्ष र लेखनदासलाई घुससहित पक्राउ गरेको छ । अख्तियारले नवलपरासी रामग्राम नगरपालिका-१८ का वडाध्य‌‌क्ष गोपाल डिस्वा मगर र लेखनदास रवीन्द्र यादवलाई दुई लाख घुससहित पक्राउ गरेको हो । उनीहरुले वडा कार्यालयबाट सिफारिस बनाइदिने भन्दै दुई लाख घुस मागेको थिए । पीडितले घुस मागेको सूचना दिएलगत्तै उनीहरुलाई पक्राउ गर ... read more...
घुस लिने गुठी संस्थानका प्रमुख प्रशासक र उपप्रशासक समातिए
२०७६ पुस १ गते २१:११
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रिय कार्यालयबाट खटिएको टोलीलेले घुस लिएको आरोपमा गुठी संस्थान प्रधान कार्यालय त्रिपुरेश्वरका प्रमुख प्रशासक नारायण चौधरी र उपप्रशासक जयप्रसाद रेग्मीलाई पक्राउ गरेको छ । अख्तियारले प्रमुख प्रशासक चौधरी र उपप्रशासक रेग्मीलाई मंगलबार गुठी संस्थान कार्यालयबाटै पक्राउ गरेको हो । जग्गा सम्वन्धि एक विवादमा सेवाग्राहीबाट घुस लिएको आरोप उनीहरुलाई पक्राउ ग ... read more...
काठमाडौं । कुनै बेला महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा कार्यरत सिपाहीदेखि अख्तियारका मान्छे डराउँथे । तर अपराध महाशाखकै एक जना प्रहरी निरीक्षकलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेको छ । त्यो पनि रंगेहात घुसहित । अरु कोही नभएर महाशाखामा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक जयनेपाल थापा पक्राउ परेका हुन् । उनलाई अख्तियारको टोलीले ४० हजार घुससहित खुमलटाबाट पक्राउ गरेको हो । प्रहरी निरीक्षक थाप ... read more...
दुई लाख घुस लिने नासुको हातमा अख्तियारले लगायो हत्कडी
२०७६ मंसिर २५ गते १३:५५
राजविराज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीको टोलीले एक जना नायब सुब्बा (नासु) लाई घुस लिँदै गर्दा रंगेहात पक्राउ गरेको छ । सप्तरीको महादेवा गाउँपालिका वडा नम्बर-६ का वडा सचिव तथा नासु नवोनाथ मिश्रले सेवाग्राहीसँग दुई लाख रुपैयाँ घुस लिएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको आयोगले जनाएको छ । उनलाई मंगलबार साँझ सप्तरीको राजविराजस्थित तैतरीगाछीबाट पक्राउ गरिएको थियो । मिश्रले जन्मदर्ता प्रमाणपत्र सम्वन्धि क ... read more...
मुद्दा मिलाउन घुस लिने प्रजिअ रिजाल निलम्बित
२०७६ मंसिर २५ गते १२:४२
दोलखा । घुस काण्ड सार्वजनिक भएपछि विवादमा परेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजाल निलम्बित भएका छन् । उनले अभियुक्तलाई धरौटीमा रिहा गर्न बढि रकम लिएको खबर सार्वजनिक भएको थियो । त्यसलगत्तै उनले पीडितहरुलाई आफू बस्ने क्वाटरमै बोलाएर रकम फिर्ता गरेका थिए । दोलखाका निवर्तमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर अभियुक्तलाई रिहा गर्न घुस लिएको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको भन्दै ... read more...
२० लाख घुससहित क्याफेबाट समातिने दुई इन्जिनियर को थिए ?
२०७६ मंसिर २४ गते २२:१७
काठमाडौं । सडक डिभिजन कार्यालय प्यठानका दुई जना सिनियर इन्जिनियरलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुसको रकमसहित पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा इन्जिनियर निरोज महर्जन र ध्रुव श्रेष्ठ रहेको अख्तियारले जनाएको छ । काठमाडौंको बानेश्वरस्थित एलिनाज ब्रेकरी क्याफेमा घुस लिँदै गर्दा उनीहरुलाई अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय टंगालबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको हो । इन्जिनियरद्धयको साथबाट २० लाख रुपैयाँ ... read more...
असई दाहाल ७ हजार घुससहित बिराटनगरबाट समातिए
२०७६ मंसिर १९ गते १२:१५
विराटनगर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीबाट खटिएको टोलीले प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) श्यामकुमार दाहाललाई घुससहित पक्राउ गरेको छ । उनलाई भारतबाट तरकारी ल्याउने व्यापारीसँग ७ हजार घुस लिइरहेको अवस्थामा बिराटनगरबाट रंगेहात पक्राउ गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । पक्राउ परेका असई दाहाल सिआरबी टोलीका हुन् । उनले भारतबाट आयात हुने तरकारी चेकजाँच नगर्ने नाममा ब्यापारीसँग दैनिक घुस लिन गरेको उजुरी अ ... read more...
दुुई लाख ५० हजार घुससहित पक्राउ परे सरकारी इन्जिनियर
२०७६ मंसिर १३ गते २०:४८
कैलाली । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कैलालीबाट खटिएको अख्तियारको टोलीले एक सरकारी इन्जिनियरलाई घुससहित पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा सहरी बिकास तथा भवन निर्माण विभाग, धनगढी संघीय आयोजनामा कार्यान्वयन इकाईमा कार्यरत इन्जिनियर त्रिलोक जोशी रहेका छन् । अख्तियारले उनको साथबाट दुुई लाख ५० हजार रुपैयाँ घुससहित समेत बरामद गरेको छ । इन्जिनियर जोशीलाई उनकै कार्यकक्षबाट शुक्रबार घुससहित रंगेहात पक्रा ... read more...
गोकर्णेश्वर-५ का सचिव घुससहित रंगेहात पक्राउ
२०७६ मंसिर ११ गते २१:४६
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेवाग्राहीसँग घुस लिने वडा सचिवलाई रंगेहात पक्राउ गरेको छ । काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर-५ का वडा सचिव दिनेश बास्कोटा २५ हजार घुससहित पक्राउ परेका हुन् । अख्तियारले उनलाई बुधबार साँझ जोरपाटीबाट पक्राउ गरेको प्रत्यक्षदर्शी स्थानियले जानकारी दिए । उनले सेवाग्राहीसँग घुस लिएर काम गर्ने गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले उनीमाथि कडा निगरानी राख्दै ... read more...
सेवाग्राहीसँग ६० हजार घुस लिने सई विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
२०७६ मंसिर १० गते १९:३१
बारा । नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब निरीक्षक जटाशंकरप्रसाद कलवार ६० हजार घुससहित पक्राउ परेका छन् । बारास्थित प्रहरी चौकी गञ्जभवानीपुरमा कार्यरत सई कलवारले भारतबाट सामान नेपाल ल्याउन सहज गराईदिने भन्दै सेवाग्राहीबाट घुस लिएका थिए । उनले सेवाग्राहीसँग घुस मागेर दुःख दिने गरेको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको थियो । अख्तियारका अनुसार उनले सेवाग्राहीसँग दुःख दिएर घुस लिने गरेको पुष्टि भए ... read more...
मालपोत कार्यालका हाकिम नै ५ लाख घुससहित रंगेहात समातिए
२०७६ मंसिर ७ गते १०:५३
सिरहा । मालपोत कार्यालय, सिरहाका प्रमुख रामबाबु मण्डल पाँच लाख रुपैयाँ घुससहित शुक्रबार आफ्नै कार्यकक्षवाट पक्राउ परेका छन् । उनले सेवाग्राहीसँग रकममा बार्गेनिङ गरिरहेको उजुरी परेपछि अख्तियारले निगरानी राख्दै आएको थियो । निगरानी राख्ने क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबास कार्याललबाट खटिएको टोलीले उनलाई शुक्रबार ५ लाख रुपैयाँ घुससहित रंगेहात पक्राउ गरेको हो । सुकुमबासीको नाममा रहेको जग ... read more...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुविर महासेठलाई हटाउनुको मुख्य कारण नै उनी भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्नु मानिएको छ । महासेठले आफ्नी श्रीमती जुली महतो र स्वकिय सचिवमार्फत करोडौं रुपैयाँ उठाएको प्रधानमन्त्री ओलीसम्म लिखित र मौखिक उजुरी पुगेको थियो । उनले आफूमातहतका विभाग र आयोजनाहरुका प्रमुखहरुसँग रकम उठाएर कर्मचारीहरुलाई आतंकित नै बताएका थिए । स्रोत भन् ... read more...
६० हजार रुपैयाँ घुस लिँदा प्रहरीकै हातमा हत्कडी लाग्यो
२०७६ कार्त्तिक १४ गते १६:५६
बारा । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारा मातहत प्रहरी चौकी गञ्जभवानीपुरमा कार्यरत एक जना सई ६० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) जटाशंकरप्रसाद कलवार रहेका छन् । उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले सेवाग्राहीबाट घुस लिँदै गर्दा बिहिबार कलैया उपमहानगरपालिकास्थित श्रीराम खाद्य उद्योग नजिकबाट पक्राउ गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अ ... read more...
मेलम्चीको पैसाले भैँसेपाटीमा महल !
२०७६ असोज ९ गते १०:४२
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ की बुहारी समेत रहेकी खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगरका अघोषित सल्लाहकार भाईकाजी घिमिरेले करोडौँ घोटला गरेको खबर बाहिरिएको छ । मेलम्चीको ठेकेदारलाई हटाएर नयाँ ठेकेदार भित्र्याउन सफल भएका घिमिरेले प्रचण्डका घरज्वाइँ जीवन आचार्य र छोरी गंगा दाहालसँग उठबस रहँदै आएको छ । स्रोतका अनुसार घिमिरेले आचार् ... read more...
लुभूको एकै घरका १० जना मानिसमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि
२०७७ असार २८ गते २२:०७